Wararka - Maxay yihiin meelaha ugu sahlan ee lagu barto Shiinaha marka loo eego luqadaha kale?
+1 209 763 8854 (Mareykanka)
Maxay yihiin meelaha ugu fudud ee lagu baran karo Shiinaha marka loo eego luqadaha kale?
Maxay yihiin meelaha ugu sahlan ee lagu barto Shiinaha marka loo eego luqadaha kale?
Dad badan ayaa sheegaya in barashada Shiinaha ay adag tahay. Xaqiiqdii, maahan. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in jilayaasha Shiinaha ay runtii u baahan yihiin laylisyo xusuus ah, Shiineysku sidoo kale wuxuu leeyahay fudeyd marka loo eego luqadaha kale.
Shiinaha Pinyin waa mid kooban oo cad, kuna qoran xarfaha Latin, lambarkuna wuu xadidan yahay. Ka dib barashada 21 horyaal iyo 38 final oo lagu daray 4 cod, waxay daboolaysaa ku dhowaad dhammaan ku dhawaaqida.
Ma jiro isbeddel qaabdhismeed ee Shiinaha. Tusaale ahaan, magacyada ku qoran luqadda Ruushka waxay u kala baxaan lab, dheddig, iyo dhexdhexaad. Magac kasta wuxuu leeyahay laba nooc, mid keli ah iyo jamac, waxaana jira lix kala duwanaansho oo kala duwan oo keli iyo jamac ah, sidaa darteed mararka qaarkood magac wuxuu leeyahay laba iyo toban nooc Sidee ku saabsan isbeddelka? Miyaad bilawday inaad u damqato ardayda baranaya Ruushka? Kaliya kuma ahan Ruushka, laakiin sidoo kale magacyada Faransiiska iyo Jarmalka, ma jiro isbeddel noocaas ah Shiinaha.
Tilmaanta tirooyinka keli ah iyo jamac ee Shiinaha waa mid fudud. Marka lagu daro “ragga” magac u yaalka shaqsiyadeed, guud ahaan looma baahna in la xoojiyo fikradda tirooyinka jamac, iyo in badan oo ku tiirsan tarjumaadda bilaashka ah.
Ereyga amarka Shiinaha waa mid aad u muhiim ah oo xadidan. Ma jiro wax lagu kala soocayo "ka mid ahaanshaha kiiska", laakiin luqado badan, waxaa jira isbadalo badan oo ku saabsan "ka tirsanaanta kiiska", waxaana sidoo kale jira astaamo wax ka beddelaya. Luuqado aad u badan iyo Shiineys Taa bedelkeeda, amarku muhiim maahan sidaas.
Shiinuhu aad ayuu uga duwan yahay luqadaha kale "qaybta naxwe ahaan". Tani sidoo kale waa meesha ugu xoogga badan ee Shiinuhu si fudud ugu sahlan yahay in lagu barto!
Waqtiga boostada: Aug-07-2020
Telefoon: + 1 209 763 8854 (Mareykanka)
Telefoon: +86 17365836697 （Shiinaha）